Snappea: madal kaa caawinaysa inaad la wadaagto waxa aad jeceshahay | Androidsis
Snappea: madal kaa caawinaysa inaad la wadaagto waxa aad jeceshahay
Snappea waa aaladda saamaxaysa kala soo bixi fiidiyowyada si fudud oo bilaa kharash ah. Helitaanka alaab tayo leh waa mid aad u fudud.
Sidoo kale, madal Snappea waxay ku siinaysaa ikhtiyaar aad ku soo dejisan karto MP4 oo leh tayo kala duwan si aadan u helin wax dhib ah markaad la wadaagto shabakadahaaga bulshada.
Sidoo kale in uu yahay maamulaha soo dejinta ee ugu caansan ee ay doorteen wadaagayaasha ugu caansan, Snappea waa beddelka MP4, kaas oo sii ballaarinaya suurtagalnimada isticmaalka aaladdan aadka waxtarka leh.
1 Sidee ayay Snappea kaaga caawinaysaa soo dejintaada fiidyaha ee mp4?
2 Tayada kala duwan ee fiidiyowyada si kor loogu qaado khibrada
3 Yaa ku maamuli kara soo dejintooda Snappea?
Sidee ayay Snappea kaaga caawinaysaa soo dejintaada fiidyaha ee mp4?
Shaqada ugu weyn ee Snappea waa inay gacan ka geysato soo dejinta fiidiyowyada MP4, inkastoo Waxa kale oo ay ku siinaysaa awoodda si loogu badalo MP4 in MP3, soo dejisan kaliya muusikada fiidiyowyada aad jeceshahay.
Laakiin sidaan hore u soo sheegnay, Snappea waa aaladda bilaashka ah ee fiidiyowyada download mp4 Qalabkaaga, iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo barnaamijyada ama kordhinta. Taasina waa meesha ay ku kala duwan yihiin maamulayaasha kale ee soo dejinta.
Waayo-aragnimada Snappea waxay had iyo jeer ahaan doontaa mid ugu fiican labadaba raaxada iyo beddelka iyo soo dejinta labadaba. Sidoo kale, kuma jiraan oo keliya xayaysiisyada waqti luminaya oo aan inta badan soo dejin, laakiin sidoo kale waxay la shaqeysaa dhammaan bogaggaaga, adigoo awood u leh inaad ku hesho dhammaan waxyaabaha ku jira warbaahinta badan ee aad rabto hal qalab oo keliya.
Boggeeda dareenka leh ayaa kugu hagi doona hawsha, laakiin kaliya 5 ficil oo fudud sida koobiyeynta, dhejinta, raadinta, beddelka iyo soo dejinta, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato dhammaan waxyaabaha ku jira aaladdaada, si aad u aragto, u dhegeysato una wadaagto waa inta jeer ee aad rabto..
Tayada kala duwan ee fiidiyowyada si kor loogu qaado khibrada
Haddi hadafkaagu yahay inaad la wadaagto fiidiyowyada MP4 ee aad soo dejisan doonto iyadoo la kaashanayo Snappea, waxaa muhiim ah inaad xisaabta ku dartid goobta aad rabto inaad geliso walxahaas si aad u doorato xallinta iyo tayada muuqaalka.
Waa inaad taas ogaataa MP4 waa qaabka ugu habboon ee la wadaago maadaama uu yahay mid fudud, aad loo jecel yahay oo laga aqbalo dhammaan goobaha.. Snappea waxay soo dejisaa fiidiyowyada MP4 waxayna sidoo kale ku siinaysaa suurtogalnimada inaad doorato cabbirka aad rabto inaad ku soo dejiso, ikhtiyaar raaxo leh oo aad fiidiyowyadaada geliso shabakada adoon ka welwelin cabbirka. Intaa waxaa dheer, adoo leh tayada saxda ah, waayo-aragnimada kuwa raacsan waxay noqon doontaa mid aad u fiican tan iyo soo saarista waxay noqon doontaa mid dareere ah oo isticmaalka xogta moobiilka waa la dhimi doonaa.
Ka fakarka bixinta khibrada ugu fiican ee isticmaalayaasha soo dejinaya fiidiyowyadooda MP4 iyo kuwa ku raaxaysta waxyaabaha la wadaago, Snappea waxay bixisaa 2 tayadood oo kala duwan: HD iyo 360p.
Looma baahna in la yiraahdo, kuwa doorta Xallinta HD waxay keeni doontaa sawir leh tayo sare, caddayn iyo faahfaahin; Si kastaba ha noqotee, haddii qaab beddelidda mp4 ilaa 360p la sameeyo, ikhtiyaarka kale ee la heli karo, waxay suurtogal noqon doontaa in la wadaago ama lagu keydiyo aaladda, fiidiyow weli tayo wanaagsan oo isticmaala xog yar marka la ciyaarayo sidoo kale waxay qaadan doontaa xusuusta aaladda .
Intaa waxaa dheer, Snappea waxay leedahay qayb aad ku soo dejisan karto fiidiyowyada ugu caansan toddobaadka; habkan ayaad uga warqabi kartaa waxa ku jira miidhiyaha badan ee wakhtigan si aad ula wadaagto sida saxda ah waxay asxaabtaadu rabaan inay arkaan.
Yaa ku maamuli kara soo dejintooda Snappea?
Snappea waa madal gebi ahaanba bilaash ah, aad u fudud in la isticmaalo oo qof walba heli karo. Qof kasta oo u baahan caawimo soo deji fiidyowyo iyo muusiko si aad u gasho qalabkaaga oo ku raaxayso dhammaan waxyaabaha ku jira khadka tooska ah, waxay ka heli doonaan Snappea xulafo aan muran lahayn.
Si kastaba ha ahaatee, kuwa teknolojiyadda gudaha ku jira waxay og yihiin fursadaha iyo faa'iidooyinka uu qalabkani ka siinayo kuwa kale ee la midka ah, waana sababta ay maalinba maalinta ka dambeysa u doortaan oo ay kula taliyaan saaxiibadooda.
Haddii aadan weli isticmaalin Snappea laakiin aad isku aragto in aad ka tarjumeyso inta badan qodobada aan hoos ku faahfaahin doono, sababtoo ah waa in aad hirgelisaa adiga oo isticmaalaya kan MP4 beddele si loo soo dejiyo fiidiyowyada.
Waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso fiidiyowyada MP4 oo leh xallin sare
Waxaad raadineysaa beddelaad si aad u soo dejiso MP3 kaas oo kuu ogolaanaya inaad doorato tayada soo dejinta
Waxaad u baahan tahay qalab si fudud loo isticmaali karo oo kuu ogolaanaya inaad si guul leh u dhammaystirto soo dejinta
Ma rabtid inaad lacag ku bixiso soo dejintaada
Waxaad rabtaa inaad ku raaxaysato soo dejinta aan xadidnayn
Waxaad u baahan tahay fiidiyowyada la soo dejiyey si aadan u yeelan calaamad-biyood
Ma rabto inaad wakhti ku lumiso xayeysiisyada boodhadhka ama pop-upka
Waxaad rabtaa inaad gasho waxa ugu badan ee la soo dejiyo uguna caansan usbuuca
Snappea waxay isu keentaa dhammaan sifooyinkan madal dareen leh oo leh naqshad muuqaal soo jiidasho leh. Kaliya waa inaad tagtaa shabakadooda oo aad bilowdo inaad ku raaxaysato dhammaan muusikada iyo fiidiyowyada fanaaniinta aad jeceshahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Snappea: madal kaa caawinaysa inaad la wadaagto waxa aad jeceshahay
Harem Hotel Codes - Liiska buuxa waa la cusbooneysiiyay
Sida loo sameeyo ciyaarahaaga si degdeg ah ugu shaqeeya Android